Kpakpando ugboro abụọ: kedu ihe ha bụ, njirimara na mkpa | Netwọk Mgbasa Ozi
Kpakpando ugboro abụọ
N’ime ụwa dum, anyị maara na e nwere ọtụtụ ijeri kpakpando. Otú ọ dị, e nwere ụfọdụ ndị a maara dị ka kpakpando abụọ. Nke mbụ chọpụtara Benedetto Castelli na 1617. Ọ bụ onye na-eso ụzọ Galileo ma chọpụta ụdị kpakpando ndị a n'ihi eziokwu ahụ bụ na ọ tụrụ telescope na kpakpando nke Akwa agba na n’eluigwe dị ezigbo nso ma ọ bụghị n’ịdị n’otu. Kpakpando kwuru bụ Alcor na Mizar.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị njirimara niile na mkpa nke kpakpando abụọ.
2 Ugo kpakpando ugboro abụọ
3 Fọdụ kpakpando abụọ
4 Systemsfọdụ usoro ọnụọgụ abụọ
Mgbe anyị lere eluigwe anya, anyị na-aga na kpakpando dị iche iche. Anyị nwere mbara ala, nebulae, ụyọkọ kpakpando, ụyọkọ, na kpakpando abụọ. O juru Benedetto Castelli anya mgbe ọ nyochara Mizar, ọ hụrụ na o nwere onye ibe. Nye onye a ọ na-atụle nke mbụ ọnụọgụ abụọ kpakpando chọpụtara. Mgbe ọ nwụsịrị, a chọpụtawo ọnụ ọgụgụ buru ibu nke kpakpando abụọ.
Iji ghọtakwuo akụkụ anụ ahụ nke kpakpando abụọ, ka anyị lee ihe bụ isi njirimara. Ọ bara uru ịmụta ọdịiche dị n'etiti anya abụọ na anụ ahụ. Igwe anya abụọ bụ kpakpando ndị ahụ yiri ka ha na-emekọ ọnụ mana ọ bụ naanị maka mmetụta nke echiche. Amụghị kpakpando abụọ a. Kama nke ahụ, okpukpu abụọ nke anụ ahụ bụ sistemụ nke kpakpando abụọ ma ọ bụ karịa nwere njikọ chiri anya ma na-agbagharị gburugburu otu etiti.
Ọ bụ ọrụ siri ike ịhụ onye ịmata ihe dị iche n’etiti kpakpando ndị jikọrọ ọnụ n’ezie na ndị anya ha na-arụ ọrụ siri ike. Agbanyeghị, ọ bụ ọrụ bụ isi maka ndị na-enyocha mbara igwe.
Ugo kpakpando ugboro abụọ
Ka anyị lee ihe bụ isi njirimara na-eme kpakpando abụọ. Tozọ e si kee ha dị ka usoro eji achọpụta ha. Ka anyị lee ihe ha bụ:
Anya: bụ ndị ahụ nwere ike ịgbasapụ anya anya ma ọ bụ na foto.
Astrometric: Ọgwụ mmiri: Na ụdị kpakpando abụọ a, ọ bụ naanị otu kpakpando ka a hụrụ, mana site na mmegharị ya ọ na-achọpụta na ọ nwere enyi.
Nkwupụta ihu igwe: Ọ ga-ekwe omume ịchọpụta ụdị kpakpando ndị a site n'ịmụ igwe ha.
Eclipsing ma ọ bụ photometric: enwere ike ịchọpụta ma ọ bụrụ na enwere ike ịghọta ọdịiche dị na ọkụ. Ọdịiche ọkụ ndị a na-eme mgbe otu akụkụ gafere n'ihu onye òtù ọlụlụ.
Nkewa na idi elu nke kpakpando abuo di nkpa na nleba anya. The angular nkewa e nyere na aak sekọnd na ọ bụ onye na-egosi na anya n'etiti kpakpando abụọ. N’aka nke ọzọ, ịdị ukwuu nke ihe na-egosi na-egosi etu kpakpando nke ọ bụla n’isi. Obere ọnụọgụ ọnụọgụgụ nke nyere, ọ na-enwukwa karịa. Ọzọkwa, e kwesịghị ichefu na nchọpụta nke kpakpando ndị a na-adabere na nkwụsi ike nke ikuku. Nakwa Ọ dabere na ogo ndị otu nyocha na ebe anyị nọ. Ihe mgbanwe niile ndị a bụ ihe kọwaa oke mkpebi telescope nwere ike inwe. Nchọpụta nke kpakpando abụọ na-enye gị ohere iji telescopes tụnyere ma si otú a mara ogo nke ọ bụla.
Fọdụ kpakpando abụọ
Anyị ga-eme obere ndepụta yana ụfọdụ kpakpando okpukpu abụọ kacha mara amara maka agba ha, nchapụta ma ọ bụ akụkọ ihe mere eme. Ihe niile anyị ga-ekwu banyere ya nwere ike ịhụ ndị na-amu amu. Kwesighi ịbụ ọkachamara ma ọ bụ nwee nnukwu ihe iji nwee ike iji lelee kpakpando ndị a mara mma.
Ọ bụ otu n'ime kpakpando abụọ kachasị ewu ewu n'etiti ndị na-agụ kpakpando. Ma ọ bụ na ọ nwere ọdịiche dị iche na agba ebe ọ bụ na otu n'ime ihe ndị ahụ bụ oroma na nke ọzọ bluish. Ọ dị mfe ịchọta, ịbụ kpakpando nke abụọ na Swan. Njirimara ndị a na-eme ka Albireo bụrụ otu n'ime ihe kacha mara amara. O di nwute, n'oge na-adịbeghị anya satellite Gaia egosiwo na ọ bụghị usoro ọnụọgụ abụọ, kama ọ bụ ngwa anya ụzọ. Ọ dị ka ọ nwere njikọ chiri anya ha mana n'ezie ha abụghị.
Na mbụ anyị kwuru banyere Mizar dịka otu n’ime ihe mejupụtara Big Dipper. Onye na-ekiri anya na-ahụ ụzọ nke ọma nwere ike ịmata oke etiti na etiti ọdụ kpakpando a wee hụ na ọ bụ usoro okpukpu abụọ. Alcor na Mizar bụ kpakpando abụọ na-agakọ na mbara igwe. Amabeghị ya ma ọ bụrụ na ọ bụ usoro ọnụọgụ abụọ ma ọ bụ na ọ bụ naanị ụzọ nyocha.
Nkewa n'etiti kpakpando abụọ a ezuola ka e jiri anya dị iche mara ya. Uzo nke uzo gi etiti kpakpando abụọ a dị afọ atọ na ibe ha. Ebe a dị oke egwu iji chee na kpakpando ndị a na-emekọ ihe n'ụzọ gravitation. Enweghị mgbagwoju anya na ihe ọ bụla sara mbara na ọ nwere ike ịbịaru nso karịa ka anyị chere. N'ọnọdụ ọ bụla, Mizar bụ usoro ụzọ dị mfe dị mfe iji hụ ma ịkwesighi inwe ọtụtụ ihe ọmụma iji mee ya.
Systemsfọdụ usoro ọnụọgụ abụọ
Nnukwu osisi Star bụ usoro okpukpu atọ. Polaris A na Polaris B guzobere usoro ọnụọgụ abụọ nke dị mfe ịmata ọdịiche dị na teliskop ọ bụla. E nwekwara kpakpando ọzọ nke so na otu sistemu a maara dị ka Polaris AB. Nke a, Otú ọ dị, bụ nke aka nke Fans, ebe ọ bụ na ọ chọpụtara na 2006 site na hubble teliskop.
Ọ bụ kpakpando ọzọ na-egbuke egbuke na kpakpando Gemini. Ọ na-ezobe usoro kpakpando nwere okpukpu isii nke kpakpando abụọ bụ isi kacha dị egwu ma mara aha Castor A na Castor B.
Ọ bụ kpakpando nke atọ na-egbuke egbuke na kpakpando Andromeda. Obi abụọ adịghị ya na ọ bụ otu n’ime ihe ndị kachasị mma ma dịkwa mfe ịchọta kpakpando abụọ na mbara igwe. Naanị ị ga-eji teliskop na ị ga - ahụ sistemụ okpukpu abụọ nwere nnukwu ọdịiche na agba. Ma ọ bụ na isi mejupụtara nwere a agba n'etiti odo na oroma na oyi na-egosi a nnọọ iche bluish hue. Ọ dị ka Albireo mana ha nọ ibe ha nso.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere kpakpando abụọ na njirimara ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Astron » Kpakpando ugboro abụọ
Nkume dị oké ọnụ ahịa